Paris St Germain ayaa Barcelona awood ku muquunisay kadib markii ay 4-1 uga badiyeen… – Hagaag.com
Paris St Germain ayaa Barcelona awood ku muquunisay kadib markii ay 4-1 uga badiyeen…
Posted on 17 Febraayo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Weeraryahanka kooxda Barcelona Antoine Griezmann ayaa aaminsan in ninka ay isku wadanka ka soo jeedaan ee Kylian Mbappe, weeraryahanka Paris Saint-Germain, inuu awood u leeyahay inuu gaaro heerka ciyaartooyda waa weyn sida Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, ka dib markii 22 jirkaan uu dhaliyay 3 gool, guushii ay 4-1 ka gaareen Barcelona tartanka Champions League ee maalintii Talaadada la ciyaaray, halka Mbappe uu rumeysan yahay inuusan weli gaarin meesha ugu sareysa.
Kadib markii uu ninkan da,da yar ka caawiyay kooxda qaranka France inay ku guuleysato koobka adduunka 2018kii, Mbappe ayaa mar kale la wareegay dareenka dadka ee ka soo muuqashadiisii ugu horeysay ee Camp Nou, ka dib markii uu Messi gool dhaliyay, weeraryahanka reer France ayaa barbareeyey ka dibna wuxuu ku daray labo gool nasashada ka dib.
Waxa kale oo uu noqday ciyaartoygii ugu horreeyay ee koox kale gurigeed ku booqda ee dhaliya 3 gool ee Champions League tan iyo markii weeraryahanka Dynamo Kiev Andrei Shevchenko uu sameeyay bishii November 1997, in kabadan hal sano kahor dhalashadii Mbappe.
“Kylian wuxuu qaatay habeen wanaagsan, Paris Saint-Germain waxay leedahay xidig mustaqbal leh, wuxuuna la mid noqon doonaa Messi iyo Cristiano,” ayuu yiri Griezmann.
Tababaraha Paris Saint Germain Mauricio Pochettino ayaa sidoo kale amaanay Mbappe, kaasoo ka caawiyay ninka reer Argentine inuu gaaro kaliya guushiisii ​​labaad ee Barcelona, ​​ka dib sannado uu ciyaartoy ahaa ka dibna tababare u soo noqday kooxda ay xafiiltamaan ee Espanyol.
“Way cadahay in Kylian uu yahay ciyaaryahan weyn,” Pochettino ayaa yiri ka dib markii uu ku guuleystay lugtii hore ee wareega 16ka.
Wuxuu intaas ku daray, “Wuxuu cadeeyay inuu dhaliyay 3-gool, laakiin wuxuu sidoo kale muujiyay dadaalkiisa kadib markii uu kaqeyb qaatay doorka daafaca sidoo kale. Hal abuurida gooldhalinta ka sokow, wuxuu sameeyay dadaal balaaran kooxda markii ay Barcelona cadaadisay.”
Tababaraha Paris St Germain ayaa intaas ku daray in saadaasha Mbappe ay run noqotay. “Wuxuu i weydiiyay tababarkii ugu dambeeyay imisa jeer ayaad ku guuleystay Camp Nou, waxaan ku iri hal mar ee kooxda Espanyol, wuxuuna ii xaqiijiyay inaan mar labaad ku guuleysan doono.